Racist Eleven Media Article | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သူ့ကိုယ်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘင်လာဒင်လို့ ဝန်ခံထားတဲ့ ဦးဝီရသူက အစိုးရအမိန့်ကြောင့် မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကြားမှာ ပြသနာတွေကို တမင်ဖန်တီးနေတာဖြစ်
U Ravika: ဘာသာခြားတွေကို တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းတာတွေ လုပ်ပေးမယ်၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဆိုဆက်ဆံမယ် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ သာသနာပြုနည်းပါ »
Racist Eleven Media Article
Here isaBurmese language sample of ‪#‎Nazi‬-like racist writing – which Eleven Media Group found it fit to print or upload.
Racism – especially the extreme, neo-Nazi version – poisons the minds of humans who may otherwise be compassionate, justice minded and intelligent.
Racism against Rohingya in Myanmar or Burma is one such Nazi-strain.
It has infested virtually all segments of society – from the highest level of government, the richest and poorest segments and anything in-between, and from the most famous human rights activists to Nobel Peace prize winner Aung San Suu Kyi.
I studied withaspecialist in Nazism, who wasaUS Army Military Police posted in Berlin immediately post-WWII and conducted interrogation of lower ranking officers ftom Hitler’s German SS. (He was reallyaHarvard PhD student/researcher who enlisted in the war, suspending his studies).
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို တွန်းတင်ခဲ့ကြပေမယ့် . . .
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်ထဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈ နိုင်ငံက ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေ နေပြည်တော်မှာ စုဝေးခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံထိပ်သီးနဲ့ အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ခဲ့ကြတာပါ။ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေကြားထဲ ဒီဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်းအရာတွေ လွှမ်းမိုးခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ လွှမ်းမိုးလောက်တဲ့ သတင်းတွေလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှတ်ချက်တွေက လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေက လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခုချိန်အရေးကြီးဆုံးက နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ရပ်တန့်တယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု မြင့်မားနေတယ်။ မတရားမှုတွေ နေရာအနှံ့ ရှိနေသလို မီဒီယာတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲက သန့်ရှင်းမျှတမှု ရှိရပါမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အရာတွေကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ဖြေရှင်းကြရမှာပါ။
ဒါကြောင့်ပဲ သမ္မတအိုဘားမား၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေမှာ ဒီအချက်တွေကို ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမေရိကန် မီဒီယာတချို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်တို့က ဘင်္ဂါလီအရေး ရှေ့တန်းတင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှု ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုအမြင်တွေ ရှိနေတာက ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘင်္ဂါလီတိုင်းရင်းသားဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုအပြင် အခြားသော အခြေခံအချက်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ရင် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမှာပါ။ ဒီအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေ ရှိပါတယ်။
Read all the rest in EMG
This entry was posted on November 18, 2014 at 6:43 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.